Indlu yaseBeau's Beach
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMandy
Iyilwe ngobuchule, iBeau ibamba ubushushu belizwe elihlala kwindawo engaselunxwemeni. I-Cottage yeyona ndawo ifanelekileyo yeentsuku zobuvila okanye iholide yeHlobo egcwele ulonwabo kunye nosapho.
I-Beau's Beach Cottage inokufumaneka kunxweme oluhle olusembindini osemantla e-NSW, ifihlwe kude kwindawo engaselwandle yaseScotts Head. Iyilwe ngobuchule, ibamba ubushushu belizwe elihlala kwindawo engqonge unxweme. I-Cottage yeyona ndawo ifanelekileyo yeentsuku zobuvila okanye iholide yeHlobo egcwele ulonwabo kunye nosapho.
I-cottage ixhotyiswe ngokupheleleyo:
-Amagumbi okulala ama-2 kunye ne-alcove (ekwaziyo ukulala iindwendwe ezi-6) ukumkanikazi, kabini, kunye neebhedi ezi-2 ezingatshatanga
- Ilinen kunye neetawuli zonke zinikezelwe
-Vula ikhitshi yesicwangciso
-Igumbi lokuhlambela kunye nempahla, kunye nelondolo eyongezelelweyo yangaphandle
-Iidesika zangaphambili nasemva
-Igumbi lokuphumla / iTV (eneDVD)-
-I-BBQ kunye nobungakanani obuhle bengca yangasemva kunye nendawo yegadi
-AKUKHO intanethi okanye ifowuni eza kukuphazamisa! Uya kusibulela kamva!
Ukuba ukhangele ngaphezu kwekofu eyonqenayo yasekuseni, iintsuku ezitshisa ilanga elunxwemeni kunye nokuhamba kwemini emva kwe-headlands kukho imisebenzi eyahlukeneyo efikelelekayo kwi-Scotts Head kunye neendawo ezikufutshane.
Kodwa asikukhuthazi ukuba ucebe nantoni na de ube ufike apha, uya kumangaliswa kukuba ixesha elityiwayo apha linokuba nencwadi nje elungileyo, idekhi yamakhadi, iintlanzi + neetshiphusi kunye nesitokhwe esilungileyo sewayini emhlophe.
-Taverna 6 (kofu emangalisayo kunye nokutya okungcono).
-Ukusefa (izifundo zokusefa)
- Ukuloba (impahla ingathengwa kwivenkile yasekhaya)
-Itennis (imizuzu emi-5 ukuhamba)
-Ukuhamba kwamahlathi emvula (10mins drive ukuya Yarrahappini Reserve)
-Ukuhamba entloko (umnenga kunye nehlengesi libonakele)
-Kiting (iikhayithi ezitshiphu ezifumaneka kwivenkile yasekhaya)
-Ukuhamba ngeKayaking (Nambucca Kayaks - 30mins drive)
-Ukhenketho oluzinzileyo kunye nokhenketho lwasefama (i-Valley of the Mist)
-Cinema (Nambucca - 30 mins drive)
Ungakhathazeki... Andizukuphazamisa ngeholide yakho. Nje ukuba ukuhlala kwakho kuqinisekisiwe ndiya kukwazisa ukuba ungazifumana njani izitshixo kwaye emva koko uya kuba uqhube indlu yonke :-)
Inombolo yomthetho: PID-STRA-6751
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Scotts Head